FBC - Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa bu’aa Yaa’ii Dureewwan Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa irratti Pireezdaantii Kooriyaa Kibbaa waliin mari’achuuf jedhu
Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa bu’aa Yaa’ii Dureewwan Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa irratti Pireezdaantii Kooriyaa Kibbaa waliin mari’achuuf jedhu
Finfinnee, Waxabajjii 7, 2010 (FBC) Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Maayik Pompiwoo bu’aa yaa’ii seena-qabeessa Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa irratti Pireezdaantii Kooriyaa Kibbaa Moon Jaye In waliin akka mari’atan qondaalli waajjira pireezdaantii Kooriyaa Kibbaa Cheyong Wa Dayee himan.
Qodaalli olaanaa Ameerikaa kun kamisa har’aa Se’ooliin akka galan akka eegamu, Ejansiin Oduu Yonhap gabaaseera.
Pireezdaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bilbila daqiiqaa 20n ofiisaanii yaa’ii Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa kana irratti Pireezdaantii Kooriyaa Kibbaa Moonii ibsana kennanii turani; kibxata yaa’ichi erga geggeffamee sa’aatiiwwaniin booda.
Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Maayik Poompiwoobis Yaa’ii Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa akaakuusaan kan jalqabaa ta’e kana irratti Pireezdaantii Kooriyaa Kibbaa Moonii fi gita isaanii biyyattiif gadi-fageenyaa ibsa akka kennan akka eegamu qondaalli kun - Chewoong Wa Dayee eeraniiru.
Yaa’ii seena qabeessa kana booda pireezdaant Doonaald Tiraampii fi Dureen Kooriyaa Kaabaa Kim ibsa waliin ta’uun kennaniin hariiroo biyyoottan isaanii lamaanii fooyyessuuf waliigaluusaanii himaniiru; sochiin kun ammoo Waraanni Kooriyaa dhaabbachuusaa ragaa qabatamaa barbaada. Waraana kana irratti loltoonni Ameerikaa miliyoona walakkaa ta’an michoota isaanii Kooriyaa Kibbaa waliin ta’uun lolaniiru.
Qondaalli kun (Chewoong Wa Dayee) akka jedhanitti marii biyyoota sadaniif ( kooriyaawwan lamaanii fi Ameerikaa gidduutti) waraana bara 1950-53 seeraan dhaabuu fi waliigalteewwan kaan Waashingtan fi Piyoongiyaang gidduuttii hojiitti hiikuuf karoorri battala kanatti qabame hin-jiru. Kana malees, dureewwan Kooriyaa lamaanii gidduutti mariin akka geggeeffamuuf sagantaan qabame akka hin-jirre himaniiru.
Qondaalli kun akka jedhanitti Pireezdaantiin Kooriyaa Kibbaa Moon bilbila lammaffaa fi dhumaa Pireezdaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif guyyoota lamaan kana keessatti bilbilaniin dhimma tumsa barbaacha loltoota Ameerikaa Waraana Kooriyaa irratti ajjeffamanii fi too’annoo jala oolfamanii irratti mari’achuuf yaada dhiheessaniiru.
Oduuwwan Biroo « Biyyoonni yaa’ii dureewwan Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa irratti yaada kennan	Dureewwan Xaaliyaanii fi Faransaay dhimma baqattootaa irratti mari’achuuf jedhu »